Guurtida oo Diidday Iscasilaadii Guddoomiye ku Xigeenka
Guurtida Somaliland ayaa cod aqlabiyad ah ku diiday Iscasilaadi Guddoomiye Ku xigeenka Sh Axmed Sh Nuux Furre.
Fadhi ay maanta oo Isniin ah isugu yimaadeen xubnaha golaha Guurtida ee Jamhuuriyadda la baxday Somaliland ayay ku diideen aqbaaladda Codsigii Iscasilaadda ee uu soo gudbiyay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Sh Axmed Sh Nuux Furre.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan (Saleebaan Gaal) ayaa furitaanka fadhiga soo bandhigay in cod loo qaado codisigii iscasilaadda ee Sh Axmed.
Dhammaanba Xubnihii fadhiga ka soo qaybgalay oo 63 mudane ahaa ayaa u codeeyay inaan la aqbalin codisga Sh Axmed Sh Nuux.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Guurtida Sh Axmed Sh Nuux ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyay ku aqbalay natiijadii codbixinta isaga oo ka noqday go'aankii iscasilaadda.
Gabagabdii kulanka ayaa waxaa ka hadlay Xaaji Cabdikariin Xuseen (Xaaji Cabdi Waraabe) oo ka mid ah odayaasha golaha, waxaana uu hadalkiisa ku canaantay Guddoomiyaha golaha oo uu sida hadalka u dhigay faray in uu golaha ka saaro mugdiga soo dhexgalay.
Guddoomiyaha golaha Guurtida Saleebaan Gaal oo soo xidhay fadhigii golaha Guurtida ayaa sheegay inaanu waxba ka ogayn eedda uu dusha ka saaray Xaaji Cabdi Waraabe, isaga oo tilmaamay in uu dalka ka maqnaa markii uu khilaafku ka bilaabmay golaha, waxaana uu kula taliyay xubnaha golaha inaan mar dambe goluhu xidhmin.
Warbixinta Wariyaha VOAda ee Magaalada Hargeysa Sahra Ciidle ka dhegayso midigta sare ee boggan.